ဖိုးညို: September 2008
ကဗျာလေး တပုဒ် အကြောင်း
ပြည်တွင်းစစ်ကို ရေးတာ ကဗျာကိုယ်ထည်က ၁၉၉၄ ပါ။ ဒါပေမယ့် ကဗျာခေါင်းစဉ်ရတာကတော့ ဒီနှစ် ၂၀၀၈ နှစ်ဦးပိုင်းကမှပါ။
၁၉၉၅ ဖြစ်ရပ်တွေအောက်ကနေရခဲ့တဲ့ ကဗျာလေးတပုဒ်လည်းရှိပါသေးတယ်။ ဟိုက္ကူဆိုပြီး ရေးခဲ့တာပါ။ နောက်ပြန်စဉ်းစားတော့ ဟိုက္ကူဆိုတာ ဂျပန်မှု ကဗျာပညာ။ ဆရာကြီး မင်းသုဝဏ်က အလှမပျက် - အနက်မယွင်း မူနဲ့ လှလှပပ ပြန်ပြခဲ့လို့သာ ကျနော်တို့စွဲခဲ့ကြတာ။ ဒါ့ကြောင့် ကိုယ့်မြန်မာမှု ကဗျာပညာမှာ ၃ ကြောင်း ကဗျာတွေရှိတာပဲ။ အဲဒီအထဲထည့်ပေါ့။ ဒါဆို ကဗျာ ကာရံပုံစံမည်သို့ပင် ဖြစ်စေ။ ခေါင်းစဉ်ကတော့ ပါရတော့မယ်လေ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီကဗျာကို အခုထိ ခေါင်းစီး မပေးနိုင်သေးပြန်ဘူး။ အဲဒီတော့ ဒီအတိုင်းပဲ ဒီမှာ တင်ထားလိုက်ဦးမယ်။ စဉ်းစားကြည့်လို့ အဆင်မပြေတော့လည်း ဟိုက္ကူလိုလို ဘာလိုလိုပေါ့မဟုတ်ဘူးလား။ ညီတို့၊ ညီမတို့လည်း ၀ိုင်းစဉ်းစားကြည့်ပါဦး။
Posted by ဖိုးညို at 10:38 AM No comments:
နမောတဿ ဘဂ၀တော အရဟတော သမ္မာသဗ္ဓုဒဿ
၁၄၊ ၁၁၊ ၁၉၉၈
(ရဟန်းပျိုသမဂ္ဂ စာစောင်တွင် ဖေါ်ပြခဲ့ပြီး)
၂၄၊ ၁၀၊ ၁၉၉၈
၄၊ ၀၆၊ ၂၀၀၇
မိုးကြိုးဆယ်စင်း တပြိုင်တည်း ပစ်ခွင်းလိုက်သလို
မျှော်လင့်ချက်တွေ လွင့်၊ ကွဲ၊ ဖွာရရာ
စိတ်နု ကိုယ်နု ဘ၀နုဖြင့်
၀မ်းသာ ၀ံ့ကြွား ဂုဏ်မယူအား။
၁၈၊ ၁၀၊ ၁၉၉၈
မဟာ ပစ္စည်းမဲ့ ဂေါတမလို့
၂၆၊ ၀၆၊ ၁၉၉၉
သူ့ဇာတာသဌေးသမီး လှူဒါန်းသည့် နိုဆွမ်းဖြင့် အဓိဌာန်ပြုခန်း
၃၊ ၀၆၊ ၂၀၀၇
အနန္ဒော ပနန္ဒနဂါးအား အောင်တော်မူခန်း
ဟဲ့ … ရှင်မောဂ္ဂလန်
တိုက်ပွဲ အရှိန်မြင့်စမ်း … !
အင်အားနဲ့ လျှင်မြန်မှုကို အသုံးချ
၂၃၊ ၀၅၊ ၂၀၀၃
၂၂၊ ၀၅၊ ၂၀၀၃
(ဗုဒ္ဓ၀င်အခန်းတွေက ကျန်ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် အတင်းလုပ်ကြံပြီး ရေးရတော့မယ့် ကျန်တဲ့အခန်းတွေ ကိုတော့ ဆက်မရေးဖြစ်တော့ဘူး။ ကျနော် အာရုံဝင်စားသလောက်သော အခန်းတွေကိုသာ ရေးထား လိုက်ပါတယ်။)
ငါချစ်တဲ့ “မြစ်” တွေ
ခေါင်းထိုးပြီး မအိပ်လိုက်လေနဲ့ဦး ကိုချို
ရိုးမ ၃ အင်တာနက်စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြခဲ့ပြီး။
Posted by ဖိုးညို at 3:59 AM No comments:
လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်သောဝါဒ အဓွန့်ရှည်ပါစေ။ ထိုကြွေးကြော်သံ တပြည်လုံးညံခဲ့ဖူးသည်။ ကျနော်တို့ကို ဖမ်းစားခဲ့ဖူးသည်။ မှန်သည်။ ကျနော်က (၇) တန်းကျောင်းသားဘ၀ ကတည်းက လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေနှင့် မေတ္တာမျှနေသူ။ လေဆိုင်ဆုံ၊ ဒေါင်ဆိုင် စသည် အမျိုးမျိုးသော နာမတို့ဖြင့် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကို ချစ်ရည် ရွှမ်းစွာ ကျနော်တို့ ခေါ်ခဲ့ကြဖူးသည်။
မြေစိုက်တဲသဏ္ဍာန် အခင်းအကျင်း။ ခုံပုကလေးများ တန်းစီရပ်ပြီး အမှတ်စဉ် မှတ်နေသည့်နေရာ။ “စားပွဲ နံပါတ် ၁ မှာ ချို၊ ပေါ့၊ ကျ ၅ ခွပ်နဲ့ စီးကရက်တပွဲချပေးပါဟေ့” သင်္ဂဟ၊ စိန်၊ ရွှေလည်တိုင်၊ ကမ္ဘာသစ်၊ ရွှေအိမ်စီ၊ ဆည်းဆာ ကျနော်တို့ မြို့ကလေးက လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တို့၏ အမည်များကို ယခုတိုင်ပင် အလွတ်ရနေသေးသည်။ ထိုအချိန်များက လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေမှာ ဖွင့်ထားသည့် တေးချင်းများလို ကျနော်တို့ဘ၀တွေ စည်းချက်မှန်နေသည့် ကာလများ။ ထိုအချိန်များက လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကို ဘိန်းစွဲသလို စွဲနေခဲ့ကြသည့် ကာလများ။ လက်ဖက်ရည်သောက်ခြင်းကိုတော့ မဟုတ်။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ထိုင်ခြင်းကိုသာ။ ထိုအချိန်ကတော့ ဘ၀ဆိုတာ အကျရည်များလှသည့် ဂိတ်ဆုံးပေါ့ကျ လက်ဖက်ရည် တခွက်ဟု နည်းမလည်ခဲ့ကြ။ လွန်ရောကြွံရော သူ့ရှိလှ ချိုကျလောက်ပဲလို့ ထင်ခဲ့ကြ။
ကျနော်တို့ဘ၀၏ ရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်များကို လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွင် ပြုစုပျိုးထောင်ခဲ့ကြသည်။ တခွက်ရှိလျှင်ပင် အတူခွဲသောက်ခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့ဘ၀များ၏ အစောဆုံးသော နိုးကြားမှုများသည် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တို့တွင် ခုန်ထခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့ဘ၀၏ အစောဆုံး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ သည်လည်း လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တို့သာလျှင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကဗျာကာရံတို့သည်လည်း စီးမျောခဲ့ကြသည်။ ဒဿန အရောင်တို့သည်လည်း တောက်ပကြကုန်သည်။ လူငယ်တို့ဘာဝ ရင်ဘတ်များသည် ပူးကပ် ကြကုန်သည်။ တဦးနှင့် တဦး ချို၊ ခါး၊ ပေါ့၊ လေး သတိပေးခဲ့ကြသည်မှာလည်း ဤသည့် နေရာသည်သာ။ စီးကရက်မီးခိုးများကဲ့သို့ လွင့်ပျယ်လွယ်လှသော အိမ်မက်နုနုများကိုလည်း ရှိုက်ဖွာခဲ့ကြဖူးသည်။ ချနင်းခံ မြေသားလို ရင့်မာလှသည့် ယုံကြည်မှုများသည်လည်း ကြေးပေါင်းထခဲ့သည်။ နောက်ဆုံး ပြောရမည်ဆိုလျင် ကျနော်တို့တောခိုပုန်ကုန်ကြဖို့ကိုပင် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွင် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
ကျနော်နှင့် လက်ဖက်ရည်ဆိုင် အဆက်ပြတ်ခဲ့ရသည်က လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးကို ၀င်ရောက်သည့် အချိန်မှ စခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ရံဖန်ရံခါလောက်တွင်သာ သူနှင့် ဆုံဖြစ်တော့သည်။ ပြောရလျင် ဖြစ်သွား၊ ဖြတ်လာ မြင်တွေ့ခဲ့ကြရခြင်း။ ထိုသို့ တောခဲ တောင်ထဲတွင် ရံဖန်ရံခါ တွေ့ခွင့်ရသည်ကပင် မေ့ရက်စရာမရှိ။ လရောင်၊ တောင်တန်း၊ တောစိမ်းအုပ်မှိုင်း၊ မီးဖိုဝိုင်းကြားမှ ၀ါးမှေးနံ့သင်းမြနေသည့် လက်ဖက်ရည်၊ မြို့ပြ ရင်ခုံသံတွေ အတွင်းစီး စီးနေသည့် သူပုန်ကျောင်းသားများ၊ ထိုညများက လက်ဖက်ရည်မူးပြီး အိပ်မရကြ။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ဘာသာစကားတွေကို အငမ်းမရ တသသပြောကြ။ ၀မ်းတီး ပေါ့ကျ၊ မှာသံတွေက ဆပ်ပြာပူပေါင်းတွေကို မှုတ်ထုတ်လိုက်ပြီး တဖောက်ဖောက်ပေါက်ကုန်ကြသလို။ အမှန်တကယ်က ရှိသမျှ ငွေကလေး ကြေးကလေး အပိုအလျှံရှိမှ ရသလောက်ဝယ်ထားသော နိုဆီ၊ သကြား၊ လက်ဖက်ခြောက်များကို အိုးတလုံးထဲ စုပုံထည့်ပြီး ရောမွှေထားတာပါ။ ဘာကိုပဲ မှာမှာ အမျိုးတည်းကိုသာ ရပေမည်။ စေတနာ့ ၀န်ထမ်း စားပွဲထိုးတွေလည်း ပေါ်လာ။ ထိုအခင်းအကျင်းကိုကြည့်ပြီး ကြည်နူးမှုလှိုင်းတွေ တလိမ့်လိမ့်။
ကျနော်တို့ တောင်ယာကုန်လုပ်ဆက်ဆံရေးအခင်းအကျင်း စစ်မြေပြင်ကျေးလက်မှသည် ၀ိရောဓိလွင်ပြင်ဆီ သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ကျနော်တို့နှင့် အတူ ၀ါးခွပ်နှင့် လက်ဖက်ရည်သောက်ခဲ့ကြသူတွေ အတော်များများ မရှိကြတော့ပြီ။ တချို့ ရန်သူစစ်အုပ်စုကို တော်လှန်ပုန်ကန်ရင်း ဂုဏ်ရောင်ပြောင်စွာ ကျဆုံး ခဲ့ကြ။ တချို့လည်း ယုံကြည်ချက် အလှမ်းကြဲလို့ ကိုယ့်မြေပုံကိုယ်ရေးဆွဲပြီး ခရီးဆက်ကုန်ကြ။ တချို့ကတော့ ဦးလည်မသုန်။
မြစ်တခုတွင် ရေ ၂ ခါချိုး၍မရ။ အခြေအနေတွေက ပြောင်းလဲလာသည်။ အပြောင်းအလဲများနှင့် ပတ်သက်၍ ကိုယ်တိုင်ပင် ရင်သပ်ရှု့မော။ လက်ဖက်ရည်တွေက အသင့်ဖျော်၍ရသော ယဉ်ကျေးမှု ဘ၀သို့ တိုးတက် ပြောင်းလဲသွားသည်။ မီဒီယာလှိုင်းစီးရင်း အင်တာနတ်ကာဖီး ဆိုတာတွေ ပေါ်လာသည်။ လက်ဖက်ရည်နှင့် ကော်ဖီကိုမရောင်း သတင်းနှင့် ဆက်သွယ်ရေးကို ရောင်းသည်။ မြန်မာပြည်မှာကိုက လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွင် ဘောလုံးပွဲကြည့်သည့် ယဉ်ကျေးမှုရှိနေပြီ။ မစ္စတာဂစ်တာလို အနုပညာတွေနဲ့ ခုန်လှုပ်နေတဲ့ ကာဖေး ဆိုင်တွေ၊ ခေတ်မီသပ်ရပ်တဲ့ ကော်ဖီဆိုင်တွေပေါ်လာပြီ။ အကန့်အသက်ကြီးမားတဲ့ အင်တာနက် ကာဖီးဆိုတာတွေလည်း ပေါ်နေခဲ့ပေပြီ။ သို့သော် လူထုဘ၀နဲ့တော့ ကင်းဝေးနေဆဲ။ လူထုကတော့ လမ်းဘေးဆိုင်တွေမှာပဲ အဖန်ရည်များလှတဲ့ ဘ၀ပေါ့ကျလက်ဖက်ရည်တွေကို သောက်နေရဆဲ။ မိသားစုရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေးသတင်းဖလှယ်မှုများ ခေတ်ပြိုင်ပြေးလွှားနေဆဲပင်။
တိုင်းပြည်ကလည်း ကတိမ်းကပါး။ ဗမာပြည်ဖွား တိုင်းရင်းသားများ အစုလိုက် အပြုံလိုက် တောပြောင်းနေကြ သောကာလ။ ဗမာပြည်ရဲ့ အခြေခံလူထု လူတန်းစားအတော်များများ ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာ။ ကြုံရာကျပန်း။ ဘ၀နဲ့ ရင်းပြီး ၀မ်းစာကို ဖြည့်တင်းနေရ။ ဘ၀တွေ အနာကြီးနာ။ ဇာတိပုည ဂုဏ်မာနတွေ ရေစီးကမ်းပြို လိုက်နေကြရ။
ဤသို့ဖြင့် တောခိုကျောင်းသားများနှင့် တောပြောင်းဗမာပြည်သားများ အမှတ်တခုတွင် ဆုံတွေ့ ကြတော့သည်။ ထိုဆုံမှတ်တွင် ထိုင်း - ဗမာ ကပြား လက်ဖက်ရည်ဆိုင်များရှိသည်။ ယဉ်ကျေးမှုတွေက ပြောင်းကုန်ပြီ၊ မတ်တပ်ခုံတွေက အများစု။ ထို့အတူ ဗမာပြည်သား အလုပ်သမားတွေရဲ့ ဘ၀ကိုယ်၌ကလည်း မိုးတိုးမတ်တက်။ ဟန်ကျပန်ကျ ထိုင်ရသည်ဟူ၍ မရှိ။ ကျပ်တည်းလှသည့် မြန်မာအလုပ်သမားတို့၏ ဘ၀တွေထဲကို မကျယ်ဝန်းလှတဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တို့ ပေါင်းစပ်မိတော့သည်။
အပြောင်းအလဲကြီး ပြောင်းလဲနေသည်ကတော့ အမှန်။ ဒီမှာကတော့ ကာရာအိုကေပါ ဆိုလို့ရသော လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ပင်ရှိသည်။ ကက်စက်တိပ်ခွေနေရာမှာ ဗီစီဒီဓါတ်ပြားတွေ ၀င်ရောက်လာပေပြီ။ တချို့ဆိုင်များဆိုလျင် ညဘက်အထိဖွင့်သည်။ ထိုဆိုင်များတွင် ညဖက်ဆို ဗီဒီယိုဇာတ်ကားပြသည်။ မြန်မာ အလုပ်သမားများ တနေ့တာ ဘ၀အမောတွေကို လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ အကြောလျော့သည်။
မဲဆောက်ဈေးတန်းထဲက လက်ဖက်ရည်ဆိုင်လမ်းကြားက ကျော်ကြားလှသည်။ ရှုပ်ထွေးမှုများဖြင့် စည်ကား သည်ဟုပင် ပြောရမည်လားမသိ။ ဘ၀တွေ လုံးထွေးရစ်နှောင်နေကြသည်က အမှန်။ ကာရာအိုကေ ဆိုသံတွေလည်း ဝေစည်လှသည်။ ဒီလမ်းကြားကို ထိုင်းရဲများကလည်း မကြာခဏဆိုသလို ၀င်ဖမ်းလေ့ ရှိသည့် နေရာ။ ၄၈ ကီလိုဆိုသည် ထိုင်းရွာမှာပင် မြန်မာလက်ဖက်ရည်ဆိုင်က ၃ ဆိုင်လောက်ရှိသည်။ ညဖက်ဆို လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကလေးများတွင် အလုပ်သမားများစုဆုံကြပြီ။ တနေ့လုံး လုပ်ငန်းခွင်ထဲက ပင်ပမ်းခဲ့သမျှ ညဖက်မှာ နားနားနေနေ လက်ဖက်ရည်သောက်ကြပိး ဇာတ်လမ်းကြည့်ကြသည်။
သတင်းနည်းပညာခေတ်ဟု ၀ိဂြိုလ်ပြုနေကြသော်လည်း အခြေခံလူထုအတွက်ကတော့ အလှမ်းဝေး နေဆဲပင်။အင်တာနက် ကာဖီးလို နည်းပညာဆက်သွယ်ရေးစနစ်ကို ကျနော်တို့လူထု မတတ်နိုင်။ ကျနော်တို့ လူထု၏ ဆက်သွယ်ရေးစနစ်က ဒူးတိုက်သတင်းဖလှယ်သည့် စနစ်။ ထိုစနစ်ကို အသုံးများသည့်နေရာက လက်ဖက်ရည်ဆိုင်များပင် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်သည် မီဒီယာစင်တာလည်း ဖြစ်နေတော့သည်။
လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တို့၏ အနေအထားနှင့် ကျနော်တို့ဘ၀ကို တွဲချည်စဉ်းစားနေရာက အပြောင်းအလဲများကို သတိထားမိလာသည်။ အပြောင်းအလဲများက အထွေထွေ။ ခေတ်တွေ၊ ဘ၀တွေ၊ ယုံကြည်ချက်တန်ဖိုးတွေ။ လူတွေ။ ထိုအပြောင်းအလဲများထဲတွင်မှ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်များက ပျော့ပြောင်းမှုရှိစွာ လိုက်ပါနေခဲ့သည်။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်များထဲတွင် ခေတ်ရဲ့ ဘ၀အမောတွေရှိသည်။ လူငယ်တွေရဲ့ လှိုင်းတံပိုးတွေရှိသည်။ လူငယ်တွေရဲ့ အိပ်မက်တွေရှိသည်။ ဘ၀ပြဿနာတွေရှိသည်။ ရင်းနှီးပွင့်လင်းမှုတွေရှိသည်။ ရဲဘော် ရဲဘက် စိတ်တွေရှိသည်။ ဝေဖန်သုံးသပ်မှုတွေ ရှိသည်။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်သည့်ဝါဒက ဆက်လက်ရှင်သန်နေဦး မည် ဖြစ်သည်။
ရောင်ခြည်ဦး အလုပ်သမားစာစောင် အတွဲ ၁၊ အမှတ် (၆) တွင် ဖေါ်ပြခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
Posted by ဖိုးညို at 8:59 PM No comments:
လှုပ်ရှားစစ်၊ အခြေခံဒေသ၊ တောင်ယာကျေးလက်။
ငါပြောမယ်ရွှေရှင်ဘုရင်ရဲ့ … နင်ဆင်ခြင်ဦး” ဆိုပြီး
နံ၊ ထိ၊ ကြား၊ သိ ရတာတွေ
ဟိုတကွေ့၊ ဒီတကွေ့နဲ့ ကိုယ်တွေ့တွေ
ဘ၀အပေါ် ဖားဥစွဲသလို များလွန်းလှပါပြီ။
ဂက်စ် (GAS) ကုန်သွားလို့ လွင့်ပြစ်ခဲ့ရတဲ့ မီးချစ်တွေလည်း
ဟာမိုနီမဆိုတက်လို့ အလှည့်ကျစာရင်း ပါယ်ဖျတ်ခံလိုက်ရတဲ့
သင်မကောင်း၍ ကျွန်ုပ်ဆိုးခဲ့သော အကြိမ်များသည်လည်းကောင်း
ကျွန်ုမကောင်း၍ သင်ဆိုးခဲ့သော အကြိမ်များသည်လည်းကောင်း
များလွန်းလှပါပြီ … များလွန်းလှပါပြီ …
… တကယ့်ကို များလွန်းလှပါပြီ။
ဒါဟာ … ဘ၀ဆိုတာပါပဲလေ။
ဆေးပေါင်းခနေတဲ့ တန်ဆောင်မုန်းလပြည်ည မဟုတ်။
အံ့သြမှုတွေ တွန်းမိ၊ တိုက်မိ။
(ခွင့်လွှတ်ပ ရဲဘော်အောင်နိုင်ထွန်းတို့ရေ …)
မတူတဲ့ပဋိပက္ခကို မတူသည့်နည်းနဲ့ ဖြေရှင်းခြင်းကို လည်းကောင်း
မရူနိုင်၊ မရှိုက်နိုင် ခံရနိုင်ပါသေးတယ်။
မြိန့်မြိန့်ကြီး ပြုံးပြီး ပြောတာကိုလည်း မြင်ရကြားရပါလိမ့်မယ်။
တော်လှန်ရေး အနိဠာရုံဆိုတာ ရှိတာပလေ။
လောကဓံကိုလည်း ပေါင်းရဲ၊ သင်းရဲရမယ်၊
ငှက်ဖျားပိုးတွေ မိုးလိုရွာနေတဲ့ ကျွန်းပွင့်ချိန်မှာလည်း ရှင်သန်ရဲရမယ်။
ချော်လဲလို ရောထိုင်ရင် မြေကိုင်ရုံရှိမှာပ။
ငါတို့ ထည့်တွက် စဉ်းစားစရာမလို
ထုနဲ့ ထည်နဲ့ ပတ်ချာလည် ဖိအားတွေကြားက
အထက် ၄ ပါး၊ အောက် ၄ ပါးနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာမဟုတ်လား။
(သစ္စာ တော်လှန်ရေးစာပေမဂ္ဂဇင်းတွင် ဖော်ပြခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။)
Posted by ဖိုးညို at 4:27 AM 1 comment:
သတ်မှတ်ထားတဲ့ ‘၆ လုံး’ရောက်ဖို့
နေ့ရော ညပါ ချီတတ်ခဲ့ကြ။
ကိုယ်က သူ့ကို မတိုက်ရင်
ကိုယ့်ကို သူက တိုက်သတဲ့။
တဘက်ရဲ့သေနတ်သံ ဒိုင်း ခနဲညံ
သူ့ရဲ့ပြောင်းဝက ဖြာ ခနဲမီးပွင့်မှ
‘၆ လုံး’ မှာ ‘ရောင်နီပြ’ ဖို့ပဲမဟုတ်လား။
၆ လုံး။ ။ စစ်တပ်သုံးစကား
တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရမည့် ရည်မှန်းချက်နေရာအား မြေပုံပါ ဂဏန်း ၆ လုံးဖြင့် ဖေါ်ပြခြင်း။ တနည်း မြေပုံညွှန်း
မပည။ ။ စစ်တပ်သုံးစကား
ညစာ။ ။ စစ်တပ်သုံးစကား
ညတိုက်ပွဲများတွင် လူမမှားစေရန်ပေးထားသည့် စကားဝှက်
ရောင်နီပြ။ ။ စစ်တပ်သုံးစကား
Posted by ဖိုးညို at 8:33 PM No comments:
အနှစ် ၂၀ ထဲက ကျောင်းသားတပ်မတော်
ယခုနှစ်သည် ၁၃၅၀ ပြည့်အရေးတော်ပုံ အနှစ်၂၀ ပြည့်နှစ် ဖြစ်သလို ABSDF (ကျောင်းသားတပ်မတော်) . အနှစ် ၂၀ ပြည့်နှစ်လည်း ဖြစ်သည်။ အနှစ် ၂၀ ဟူသည် မျိုးဆက်တဆက်ဖြစ်သည်။ ကျနော်က ABSDF (ကျောင်းသားတပ်မတော်) ပထမမျိုးဆက် ဖြတ်သန်းခဲ့သည့် ခရီးလမ်းကို စေ့ငုနေမိသည်။ အနှစ် ၂၀ သို့ ဒုတ်ဒုတ်ထိရောက်၍ ABSDF ၏ ပထမမျိုးဆက်ခေါင်းဆောင်မှု အများစုအား ပြန်လှည့်ကြည့်သောအခါ သူတို့ မရှိကြတော့။
ABSDF ပထမမျိုးဆက်၏ အနှစ် ၂၀ ခရီးအား ပြန်ကြည့်သောအခါ ---
ABSDF ပထမမျိုးဆက်၏ ကောင်းမှုများအဖြစ် ---
- ABSDF အား ၁၃၅၀ ပြည့်အရေးတော်ပုံ မျိုးဆက်၏ တပ်ဦးအဖွဲ့အစည်းအဖြစ် သမိုင်းအမွေဆက်ခံကာ ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့သည်။
- ဗမာပြည်အနှံ့အပြားရှိ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးဒေသအသီးသီးသို့ ရောက်ရှိနေ သော ၁၃၅၀ ပြည့် အရေးတော်ပုံ ကျောင်းသားအများစုအား စုစည်း၍ ABSDF အား ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့သည်။
- ၁၃၅၀ ပြည့်အရေးတော်ပုံ၏ အမြင့်ဆုံးကြွေးကြော်သံဖြစ်သည့် “ရ ရင် ရ။ မရ ရင် ချ” ကြွေးကြော်သံအား လူထုလမ်းညွှန်ချက်အဖြစ်သဘောထားကာ ABSDF (ကျောင်းသားတပ်မတော်) ကို ဖွဲ့စည်းထူထောင် နိုင်ခဲ့သည်။
- စစ်အုပ်စု၏လက်အောက်တွင် ငြိမ်းချမ်းသောနည်းဖြင့် ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးများကို ရရှိနိုင်လိမ့်မည် မဟုတ် (ABSDF ကြေညာချက် (၁) ၇ - ၁၁ - ၈၈ ။ အပိုဒ်ခွဲ ၄ မှ) --- ဟု ယုံကြည်ခံယူကာ နေ၀င်း စစ်အုပ်စုအား အပြီးအပြတ် ချေမှုန်းဖျောက်ဖျက်မည့် လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးကြီးကို အောင်မြင်သည် အထိ ဆင်နွှဲသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း (ABSDF ကြေညာချက် (၁) ၇ - ၁၁ - ၈၈။ အပိုဒ်ခွဲ ၅ မှ) --- ကြေငြာချက် (၁) တွင် ဖေါ်ပြ၍ ABSDF အား ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံ၏ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး တပ်ဦးအဖွဲ့အစည်းအဖြစ် အတိအလင်းဖွဲ့စည်းခဲ့နိုင်ခဲ့သည်။
- ဗမာပြည်ကျောင်းထုတရပ်လုံးနှင့်ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတလျောက်လုံးကိုင်စွဲခဲ့သည့် အမျိုးသားနိုင်ငံရေး လမ်းကြောင်းအား ABSDF ၏ ဦးဆောင်နိုင်ငံရေးအတွေးအခေါ်လမ်းစဉ်ဖြစ်သည့် အမျိုးသား နိုင်ငံရေး လမ်းစဉ်အဖြစ် တရားဝင် ပြဌာန်း ကိုင်စွဲနိုင်ခဲ့သည်။
- လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတရပ်အနေဖြင့် မရှိမဖြစ်လိုအပ်၍ အသက်သွေးကြောသဖွယ် ဖြစ်သော နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်။ စစ်ရေးလမ်းစဉ်တို့အား ရေးဆွဲပြဌာန်းပေးနိုင်ခဲ့သည်။
ဤကောင်းမှုများအတွက် ပထမမျိုးဆက်ကို ကျေးဇူးတင်ရမည်ပင်။ ထို့အပြင် ABSDF ပထမမျိုးဆက်. အနှစ် ၂၀ အတွင်း တနိုင်ငံလုံးလက္ခ္စာဆောင်သည့် ထိုးစစ်ကြီးများအဖြစ် အောက်ပါတို့ကို တွေ့ရမည် ဖြစ်သည်။
- DAB ပူးတွဲစစ်ဆင်ရေးလှုပ်ရှားမှု (၁၉၉၀) - တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အင်အားစုများနှင့် လက်တွဲ၍ ရေး မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအထိဆင်နွှဲနိုင်ခဲ့သည်။
- အခြေခံဒေသထိုးဖောက်ရေးလှုပ်ရှားမှု (၁၉၉၂) - ၁၉၉၈ ခုနှစ်အထိ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ကိုယ်ပိုင်ဒေသရရှိ ရေးအတွက် ဆင်နွှဲသည့်စစ်ဆင်ရေးဖြစ်သည်။ တနိုင်ငံလုံးသဘောဆောင်သည့် စစ်ရေးအောင်မြင်မှုအဖြစ် ရန်သူစစ်အုပ်စု၏ “နဂါးမင်းထိုးစစ် - ၁၉၉၂ (မာနယ်ပလောထိုးစစ်)” အား ABSDF အပါအ၀င် လက်ဝဲ လက်ယာ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အင်အားစုများ စုပေါင်းကာ ခုခံကာကွယ်ခြင်းဖြင့် တော်လှန်ရေး ဂုဏ်သိက္ခာတက်စေခဲ့သည်။ ဤသည်လည်း ABSDF ပထမမျိုးဆက်၏ကောင်းမှုဟုပင် ယူသော်ရမည် ထင်သည်။
ABSDF ၏ အနှစ် ၂၀ ခရီးမှ အရေးကြီးမည်ထင်သည့် ဖြစ်စဉ်အစိတ်အပိုင်းတချို့အား ပြန်ကြည့်ဖြစ်သည်။ ၁၃၅၀ ပြည့် အရေးတော်ပုံတွင် ဗကသ အား လူသိရှင်ကြား ဖွဲ့စည်းလိုက်နိုင်သည်။ အရေးတော်ပုံအတွင်း လူထု. အကြမ်းမဖက် သပိတ်တိုက်ပွဲ ပြင်းထန်မြင့်မားလာသည်နှင့်အမျှ စစ်အုပ်စု၏ ဖိနှိပ်ရက်စက်မှု ကလည်း ပြင်းထန်မြင့်မားလာသည်။ ရန်သူစစ်အုပ်စု၏ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုကို မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်လာသည့် ရဟန်းရှင်လူ ကျောင်းသားပြည်သူတရပ်လုံးက အမြင့်ဆုံးတိုက်ပွဲ ကြွေးကြော်သံဖြင့် တခဲနက် တိုက်ပွဲ ခေါ်ခဲ့သည်။ “ရ ရင် ရ။ မရရင် ချ” ထိုကြွေးကြော်သံသည် ရန်သူစစ်အုပ်စု အကြောက်ဆုံးသော တိုက်ပွဲ ခေါ်သံပင်။ စစ်အုပ်စုက အချိန်မဆိုင်းပဲ အရေးတော်ပုံကို အင်အားသုံးဖြိုခွဲခဲ့သည်။ ထိုသို့ဖြင့် ၁၃၅၀ ပြည့် အရေးတော်ပုံသည် တပါတီ စစ်အ္စာာရှင်ဖြစ်သော မဆလအား ဗမာပြည်မြေပေါ်မှ ရှင်းလင်းဖယ်ရှား လိုက်နိုင်သည့် တစိတ်တပိုင်း အောင်မြင်မှုဖြင့် အဆုံးသတ်ခဲ့ရသည်။ သို့သော် ၁၃၅၀ ပြည့်အရေးတော်ပုံ က ကောင်းမှုတွေတော့ ထားခဲ့နိုင်သည်။ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲချုပ်။ ဗမာပြည် ဆိုင်ရာ ကျောင်းသား သမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ်။ နောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့် ၉၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲ ရလာဒ်။
ABSDF (ကျောင်းသားတပ်မတော်)။ ၁၃၅၀ ပြည့် အရေးတော်ပုံသည် အထွေထွေလူထုတိုက်ပွဲဖြစ်သလို ကျောင်းသားတိုက်ပွဲ အဖြစ်လည်း ကမ္မည်းတွင်သည်။ တစိတ်တပိုင်းအောင်မြင်မှုများဖြင့် အရေးတော်ပုံ အဆုံးသတ်သွားသောအခါ တိုက်ပွဲဝင် ကျောင်းသား လူငယ်များစွာ တောခိုခဲ့ကြသည်။
တောခိုကျောင်းသားလူငယ်များသည် ၁၃၅၀ ပြည့် အရေးတော်ပုံမျိုးဆက်အဖြစ် အခိုင်အမာ ရပ်တည် ခဲ့သည်။ ၁၃၅၀ ပြည့်အရေးတော်ပုံကို အမွေဆက်ခံခဲ့ကြသည်။ ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှု။ ဗကသ အစဉ်အလာအား ဆက်ခံခဲ့ကြသည်။ (ကျောင်းသားသမဂ္ဂ၏ အစဉ်အလာအတိုင်း ခွပ်ဒေါင်းအလံ ကိုလွှင့်ထူကာ “ABSDF ကြေညာချက် (၁) ၇ - ၁၁ - ၈၈။ အပိုဒ်ခွဲ ၃ မှ”) အရေးတော်ပုံ. တိုက်ပွဲဝင် ရဟန်းရှင်လူ ကျောင်းသားပြည်သူများ သွေးဖြင့်ရေးသည့်အမိန့် “ရ ရင် ရ။ မရ ရင် ချ” ကို နာခံဆက်ခံပြီး “မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး (ကျောင်းသားတပ်မတော်)”ကို ဖွဲစည်း ထူထောင်ခဲ့ကြသည်။
ABSDF အနှစ် ၂၀ သမိုင်းအတွင်း တိုက်ပွဲသဏ္ဍန်ဆိုင်ရာ အချင်းပွားမှုများစွာ ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ အထက်တွင် တင်ပြခဲ့သည့် သမိုင်းဆိုင်ရာ မုချတရားအရ ကျနော့်အမြင်ကို တိုက်ရိုက်တင်ပြပါမည်။ ABSDF အား လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးလမ်းကြောင်းမှ သွေဖီစေရန်နှင့် အားနည်းစေရန် ကြိုးစားသူသည် လုံးဝ အမှားကျူးလွန်သူ ဖြစ်သည်။ တစိတ်တပိုင်းမျှကြိုးစားသူသည်လည်း လုံးဝအမှားကို ကျူးလွန်သူပင် ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ၁၃၅၀ ပြည့် အရေးတော်ပုံနှင့် အရေးတော်ပုံအတွင်း ကျဆုံးခဲ့ရသော ရဟန်းရှင်လူ ကျောင်းသားပြည်သူ အာဇာနည် အထောင်အသောင်းကို သစ္စာမဲ့ဖေါက်ပြန်ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
ကျောင်းသားတပ်မတော် ဘာလဲ။ ဘယ်လဲ ယတိပျက်ရွေးချယ်ရမည့် တိုက်ပွဲကိုလည်း အနှစ် ၂၀ ခရီး အတွင်း ကျနော်တို့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသေးသည်။ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ် - လမ်းကြောင်း ၃ သွယ်။
ထိုကိစ္စသည် ကျောင်းသားတပ်မတော်အတွက် ကိစ္စကြီးဖြစ်သည်။ အမှားအယွင်း အတိမ်းအစောင်း မခံသည့် ကိစ္စကြီးလည်း ဖြစ်သည်။ ထိုကိစ္စ၏ဇစ်မြစ်သည် ကာလရှည်ကြာကတည်းက အစပြုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သော်လည်း လတ်တလောဖြစ်ရပ်အဖြစ် ၉ လေးလုံးလျောမွေးဟု ယူဆသည်။ ABSDF ပထမမျိုးဆက် သည် မီဒီယာအားကိုးဖြင့် ၉ လေးလုံးကို လှုံ့ဆော်ခဲ့သည်။ လျောမွေးဖြစ်သွားသောအခါ နိုင်ငံရေး ကုန်သွားသည်။ ထိုအခါ ထွက်ပေါက်ရှာကြတော့သည်။ ထက်ပေါက်ရှာသည်က အကြောင်းမဟုတ်။ ကျောင်းသားတပ်မတော်အား နိုင်ငံရေးတောင်ပံ (Political wing) စစ်ရေးတောင်ပံ (Military wing) ခွဲမည်ဟုဆိုလာသောအခါ တရားအရ။ အစဉ်အလာအရ ပြန်လည်သုံးသပ်မှုများ လုပ်လာရသည်။ ခုခံကာကွယ်မှုများ လုပ်ရတော့သည်။
နိုင်ငံရေးတောင်ပံ (Political wing) စစ်ရေးတောင်ပံ (Military wing) ခွဲခြင်းသည် ABSDF (ကျောင်းသားတပ်မတော်) အား နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်း တခုအောက်သို့ သွပ်သွင်းလိုခြင်း ဖြစ်သည်။ ယင်းသည် ကျောင်းသားအစဉ်အလာ။ ဗကသ အစဉ်အလာနှင့် ဆန့်ကျင်သည်။ ABSDF ၏ သီးခြား လွတ်လပ်သည့် အမျိုးသားနိုင်ငံရေးအင်အားစုအသွင်ကို ဖျက်ဆီးခြင်းဖြစ်သည်။ ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှု အစဉ်အလာ။ သမဂ္ဂ အစဉ်အလာတွင် နိုင်ငံရေးပါတီ အဖွဲ့အစည်းတခုခု၏ လက်အောက်ခံလုပ်ခဲ့သည်မရှိ။ သီးခြားလွတ်လပ်သည့် အမျိုးသားနိုင်ငံရေး အင်အားစု။ လှုပ်ရှားမှုအဖြစ်သာ တွေ့မြင်ရသည်။ အာဏာရ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်သည်ဖြစ်စေ။ မဖြစ်သည်ဖြစ်စေ တူလျင်တွဲလုပ်သည်။ မတူလျင် ခွဲလုပ်သည်။ လူထုအကျီုးစီးပွား။ ကျောင်းသားထုအကျိုးစီးပွားနှင့် ဆန့်ကျင်လာလျင် တိုက်ပွဲဝင်သည်။
ABSDF (ကျောင်းသားတပ်မတော်) သည် ၁၉၂၀ ကတည်းကစတင်ခဲ့သည့် ဗမာပြည်ကျောင်းသား လှုပ်ရှားမှုနှင့် တဆက်တစပ်တည်း ဖြစ်သည်။ စစ်ကြောင်း တကြောင်းတည်း ဖြစ်သည်။ သမဂ္ဂ အစဉ်အလာကို အမွေဆက်ခံခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ (ကျောင်းသားသမဂ္ဂ. အစဉ်အလာအတိုင်း ခွပ်ဒေါင်းအလံကို လွှင့်ထူကာ “ABSDF ကြေညာချက် (၁) ၇ - ၁၁ - ၈၈။ အပိုဒ်ခွဲ ၃ မှ”) ကျောင်းသားတပ်မတော်သည် ကျောင်းသားသမဂ္ဂ အစဉ်အလာအတိုင်း လွတ်လပ်သည့်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ABSDF ၏ ကြေညာစာတမ်းဟု ဆိုရမည်ဖြစ်သည့် ABSDF ကြေညာချက် (၁) အပိုဒ်ခွဲ ၂ ၌ “ကျွန်ပ်တို့ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးသည် မည်သည့်နိုင်ငံရေးပါတီ မည်သည့်တော်လှန်ရေးအင်အားစုများ. လွှမ်းမိုးမှုမရှိပဲ လွတ်လပ်စွာ ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်သည်” (ABSDF ကြေညာချက် (၁) ၇ - ၁၁ - ၈၈။ အပိုဒ်ခွဲ ၂ မှ) ဟု အတိအလင်း ကြေညာထားခဲ့သည်။
ကျနော်တို့က ထိုတရားနှင့်အညီ ABSDF (ကျောင်းသားတပ်မတော်) ၏ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး လမ်းစဉ် အလံအား အခက်အခဲများစွာဖြင့် လွှင့်ထူချီတတ်ခဲ့ကြသည်။ တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြသည်။ ထိုတိုက်ပွဲတွင် ကျနော်တို့အရေးနိမ့်ခဲ့ပါက ကျောင်းသားတပ်မတော်၏ နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်း။ သမိုင်းလမ်းကြောင်းသည် အကြီးအကျယ် ချိုးကွေ့သွားပေမည်။ ထိုတိုက်ပွဲတွင် ကျနော်တို့အရေးနိမ့်ခဲ့ပါက ဖောက်ပြန်၍ လက်အောက်ခံဖြစ်သော အစဉ်အလာသို့ ထိုးစိုက်ကျဆင်းသွားပေမည်။ ထိုတိုက်ပွဲတွင် ကျနော်တို့ အရေးနိမ့်ခဲ့ပါက ခွပ်ဒေါင်းကြိမ်စာသင့်ပေမည်။ ထိုတိုက်ပွဲတွင် ကျနော်တို့အရေးနိမ့်ခဲ့ပါက နယ်ချဲ့ ဆန့်ကျင်ရေး။ ဖက်ဆစ်တိုက်ဖျက်ရေး။ ဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေး အဆက်ဆက်တွင် ကျဆုံးခဲ့လေပြီးသော ကျောင်းသားအာဇာနည်အထောင်အသောင်း၏ ကြိမ်စာသင့်ပေမည်။ ထိုတိုက်ပွဲတွင် ကျနော်တို့အရေးနိမ့် ခဲ့ပါက အစဉ်အလာ ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှု ။ ကျောင်းသားသမိုင်းနှင့် ကင်းကွာ၍ ဖောက်ပြန်သော ကျောင်းသား အင်အားစု ဖြစ်သွားပေမည်။ ထိုတိုက်ပွဲတွင် ကျနော်တို့အရေးနိမ့်ခဲ့ပါက ဗမာပြည် ကျောင်းသားထု တရပ်လုံးနှင့် ကင်းကွာသွားပေမည်။ ထိုတိုက်ပွဲတွင် ကျနော်တို့အရေးနိမ့်ခဲ့ပါက ဗမာပြည် ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုအားလုံး၏ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး စစ်ကြောင်းအဖြစ်မှ ရှက်ဖွယ်လိလိ သွေဖယ် သွားပေမည်။
ယခုအနှစ် ၂၀ အတွင်း နိုင်ငံရေးမှန်ှု ABSDF (ကျောင်းသားတပ်မတော်)သည် ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာ ရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်ခဲ့သည်ဆိုလျင် ထိုလောကဓံကို အနိုင်တိုက်နိုင်ခဲ့၍သာဖြစ်သည်။ ကြေညာချက် (၁) မှ စတင်ကာ တနိုင်ငံလုံးသို့ပေးထားသော နိုင်ငံရေးကတိက၀တ်ဖြစ်သည့် လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးကြီး ကို အောင်မြင်သည်အထိ ဆင်နွှဲသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း (ABSDF ကြေညာချက် (၁) ၇ - ၁၁ - ၈၈။ အပိုဒ်ခွဲ ၅ မှ) ဆိုသည့် နိုင်ငံရေးအာမခံချက်အား ယနေ့တိုင် ဦးလည်မသုန်ထမ်းရွက်ခှဲု့သာ ဖြစ်သည်။ အနှစ် ၂၀ သို့ရောက်၍ ABSDF ၏ ပထမမျိုးဆက်ခေါင်းဆောင်မှု အများစုအား ပြန်လှည့်ကြည့်သောအခါ သူတို့ မရှိကြတော့။ သူတို့မရှိတော့သော်လည်း ABSDF (ကျောင်းသားတပ်မတော်) က ဆက်လက်၍ ၁၃၅၀ ပြည့် အရေးတော်ပုံ၏ မပြီးဆုံးသေးသည့်တာဝန်။ ကျောင်းသားထုတရပ်လုံး၏ ဒီမိုကရေစီရေးတာဝန်များအား ပခုံးထမ်းတာဝန်ယူလျက်ပင်ရှိသည်။ ကျနော်တို့တွင် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမရှိ။ ကျနော်တို့တွင် မူနှင့် အစဉ်အလာ သာရှိသည်။ ABSDF (ကျောင်းသားတပ်မတော်) တွင် ကျရာတာဝန်များအား ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသည့် ပထမမျိုးဆက်ဝင်များ ဆက်လက်၍ ရှိနေသည်ကိုလည်း တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုရဲဘော်များကိုတော့ဖြင့် ကျနော်တို့ အလေးအမြတ်ပြုသည်။ ABSDF (ကျောင်းသားတပ်မတော်)၏ မူကို နာခံသူ။ ကတိက၀တ်ကို လေးစားသူ။ အစဉ်အလာကို လေးနက်သူများအဖြစ် အလေးအမြတ်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။
ဗမာပြည်အဖိနှိပ်ခံတို့၏ တော်လှန်သော ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲက မပြီးသေး --- ။ စစ်အုပ်စုကို အပြီးအပြတ် ချေမှုန်းဖျောက်ဖျက်မည့် (ABSDF ကြေညာချက် (၁) ၇ - ၁၁ - ၈၈။ အပိုဒ်ခွဲ ၅ မှ) တော်လှန်ရေးခရီးစဉ်က မပြီးသေး။ ထို့သည်နှင့်အတူ ABSDF (ကျောင်းသားတပ်မတော်)၏ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးသည် လည်း မပြီးဆုံးသေး။
ဒေါင်းအိုးဝေ အတွဲ (၁) အမှတ် (၆)၊ဧပြီ - မေ - ဇွန်၊ ၂၀၀၈
Posted by ဖိုးညို at 8:27 PM No comments:
ABSDF ၏ မျိုးဆက်ကိစ္စ ဆွေးနွေးချက်
“ပါရမီသက်ကုန်သွားလျှင် ပညာသက်ဖြင့် ဆက်ရမည်” ဟူသော စကားရပ်ကို ကြားဖူးသည်။ မကဒတ၏ လက်ရှိအခြေအနေသည်လည်း ထိုအတိုင်းပင်။ ဤနေရာတွင် “ပါရမီသက်” ဆိုသည်မှာ ၁၃၅၀ ပြည့် ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကို ရည်ညွန်းခြင်းဖြစ်သည်။ “ရှစ်လေးလုံး - ပါရမီသက်” အစား “ကျိုးစားအားထုတ်မှု - ပညာသက်” ဖြင့် ဆက်ရမည့် အခြေအနေအချိန်အခါသို့ ဆိုက်ရောက်လာပြီဟု သုံးသပ်ယူဆသည်။ “ပညာသက်” ဘာဖြစ်သင့်သနည်း။ ထိုသည်ကို ဗမာပြည် ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှု၊ ကျောင်းသားအဖွဲ့အစည်းများ (အထူးသဖြင့် ဗကသ) တိုက်ပွဲစဉ်ဆက်၊ သမိုင်းအစဉ်အလာများနှင့်အညီ ရှာဖွေရမည်ဖြစ်သည်။
ဦးစွာ ယနေ့ရောက်ရှိနေသည့် တပ်ဦး၏ မျုိုးဆက်လက္ခဏာအား ဆွေးနွေးပါမည်။ မျိုးဆက်တွက်ချက်မှု နှစ်ကာလအရ အနှစ် ၂၀ လျှင် မျိုးဆက်တဆက်ဖြစ်သည်။ မကဒတသည် ၂၀၀၈ သို့ရောက်သောအခါ မျိုးဆက်တဆက်သို့ ကူးပြောင်းသွားပြီဖြစ်သည်။ မကဒတ ပထမမျိုးဆက်နှင့် မကဒတ ဒုတိယမျိုးဆက်ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ထိုမျိုးဆက် ၂ ခုသည် သီးခြားလက္ခဏာများကိုယ်စီ ရှိနေကြသည့် မျိုးဆက်များဖြစ်သည်။ ထိုသီးခြားလက္ခဏာများအား ဆွေးနွေးပါမည်။
- လူ့အခွင့်အရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ အခြေခံဥပဒေ၊ ဖက်ဒရယ်သတန်း
- သံတမန်ရေးသင်တန်း၊ အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှုသင်တန်း
- ထိုင်းအာဏာသိမ်းပွဲအား အမေရိကန်မှကန့်ကွက်မှုမပြုခြင်း …စသည့် ဒီမိုကရေစီ၊ လူ့အခွင့်အရေး နှင့် အကြမ်းမဖက်ရေးစံများမှ ခွဲထွက်လာသည့် အခင်းအကျင်းများကို တွေ့ရမည် ဖြစ်သည်။)
- ပထမမျိုးဆက်သည် ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံနှင့် စတင်ခဲ့ပြီး ရွှေဝါရောင်အကြွေးဖြင့် အဆုံးသတ်ခဲ့ရသည့် အင်အားစုဖြစ်သည်။
Posted by ဖိုးညို at 8:25 PM No comments:
၁၈ နှစ်ထဲက မှတ်စု
၂၀၀၆ ကယမ်းပြည်သစ် ပါတီ ဥက္ကဌ ငြိမ်းကယန်းထန် ကျဆုံးကွယ်လွန်သည်ဟု ကြားစဉ်က ရေးဖြစ်တဲ့ကဗျာ
Posted by ဖိုးညို at 7:20 PM No comments:
Posted by ဖိုးညို at 8:24 PM No comments:
သြဂုတ် (၁၂) ရက်နေ့။ ကျနော် သောင်ရင်းကို ရောက်တယ်။ သောင်ရင်းဟာ တောင်ဘက်ကနေ မြောက် ဘက်ကို စီးဆင်းနေတဲ့ သဘာဝလွန်မြစ်။ အဲဒီသဘာဝလွန်မြစ်ရဲ့ ကမ်းနဖူးမှာ ဧည့်ခန်းနဲ့ အင်္ကျီကောင်းမှ ဆက်ဆံရေးကောင်းတက်တဲ့ လူတွေကို စွန့်၊ အမှိုက်တွေ အသိုက်ဖွဲ့နေတဲ့ အရပ်ဒေသကို စွန့်၊ ကိုယ့်နှလုံး သားကိုယ် မီးပုံရှို့ပြီး လှုံရဲခဲ့သူတွေ၊ ကမ္ဘာမြေတခုလုံးကို ဆုံးရှုံးသူသာ ကမ္ဘာမြေကို ပြန်ရပေလိမ့်လို့ ယုံကြည် သူတွေ၊ ငါတို့တတွေ စိုက်မိတဲ့ စိတ်စိုက်ကွင်းတွေဟာ စံကွက်အမှန်တွေပါလို့ ယုံကြည်ကြသူတွေ ရှိကြတယ်။ ကျနော် သူတို့ရှိရာကို ပုလဲလိုနေတဲ့ လယ်ကွက်တခုလို ဆိုက်ရောက်သွားတယ်။ ဘ၀ကို ညှစ်ကြည့်တော့ အချိုရည်လေး ကျန်သေးပါတယ်။ ကျနော်နဲ့အတူ ကြခတ်(ရင်း - ၈)လည်း ပါတယ်။ ကျနော်တို့ရောက်သွားတော့ သောင်ရင်းဟာ ၀၀ဖြိုးဖြိုးပါပဲ။ သူ့တခေါင်းလုံး ကလစ်သေးသေးလေးတွေနဲ့ အလှဆင်ထားတဲ့ အပျိုမတယောက်လို သောင်ရင်းဟာ မောင်းပြန်သေနတ်တွေနဲ့ အလှဆင်ထားတယ်။ အဲဒီ ၀၀ဖြိုးဖြိုး သောင်ရင်းရဲ့ ပုခုံးထက်ကနေ စောမူသာ (ဆေး)က ကျနော်တို့ကို ကြိုတယ်။ ညဘက်ရောက်တော့ မိုက်တွင်းနက်နက် ကဗျာပေါ်ချစ်တဲ့ အချစ်တွေ မြေသြဇာကောင်းကောင်းနဲ့ ထွားကြိုင်းလာခဲ့တယ်။ ဟုတ်ကဲ့ … ကျနော်တို့ ကဗျာတွေကို လုံးတိုက်ကြီး ပြုတ်ကျလာတဲ့ အချစ်တွေနဲ့ အသံထွက် ဖတ်ခဲ့ကြတယ်။ သောင်ရင်းက ပြောင်းပြန်ကြီး စီးနေတယ်။ ကျနော် ပထမဆုံး ကြယ်ပြာလေးနဲ့ ထမင်းစားလိုက်တယ်။
Posted by ဖိုးညို at 8:22 PM No comments:
Posted by ဖိုးညို at 3:01 AM No comments:
ကျနော်တို့ဘာကြောင့် မီဒီယာလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေကြသလဲ။ အနေအထားက ထိုနေရာမှ ပြန်စဉ်းစား ကြရမည် ထင်သည်။
ပြည်ပရောက်မီဒီယာသမားများ အားလုံးနီးပါးတွင် နိုင်ငံရေးနောက်ခံ အနည်းနှင့်အများ ရှိကြသည်ချည်းဖြစ်သည်။ နိုင်ငံရေး နောက်ခံဆိုသည်မှာလည်း အဆက်ဆက်သော စစ်အုပ်စုကို ဆန့်ကျင်ခဲ့သည့် နိုင်ငံရေးနောက်ခံ ဖြစ်သည်မှာ အထူးပြောစရာလိုမည် မထင်ပါ။ မီဒီင်္ယာသမားတယောက်ဆိုလျင် ၇၀ စုနှစ် နိုင်ငံရေး လှိုင်းတံပိုး တိုက်ပွဲတခုတွင် ထောင်တန်းကျဖူးသူ။ ထောင်ထွက်လျင် လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးလုပ်ရန် သစ္စာပြုဖူး သော်လည်း တောမခိုနိုင်သဖြင့် မီဒီယာသမားအဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့ရပါသည်ဟု မီဒီယာကွန်ဖရင့်တခုတွင် လူသိ ရှင်ကြားပြောဖူးသည်။ လူတဦးချင်း၏ စွန့်လွှတ်နိုင်မှု အနည်းအများအပေါ်မူတည်သည့် ရွေးချယ်မှုပင် ဖြစ်သည်။ မွေးရာပါအခွင့်အရေးလည်း ဖြစ်သည်။ ပြဿနာမရှိ။ ပြဿနာက တာဝန်ယူမှုအပိုင်း။
ဗမာပြည်တွင် ဖိနှိပ်သူနှင့် အဖိနှိပ်ခံတို့ ရာစုနှစ်တ၀က်မက ပြင်းထန်သည်းသန်စွာတိုက်ပွဲဝင်နေကြသည်။ ပြောရမည်ဆိုလျင် ပြည်ပရောက်မီဒီယာသမားများ တွင်ကျယ်နေရသည်မှာလည်း ထိုတိုက်ပွဲ၏ ကျွဲကူးရေပါ ကိစ္စပင်ဖြစ်သည်။ ဗမာပြည်၏တိုက်ပွဲများ သည်းသန်ပြင်းထန်မှုမရှိပဲ ပြည်ပရောက်မီဒီယာများနှင့် ပြည်ပရောက် မီဒီယာသမားဟူ၍ အခိုင်အမာပေါ်လာဖွယ်မရှိ။ ဘီဘီစီသည်ပင် ၈၈ အရေးတော်ပုံကြီးအတွင်း တော်လှန်သည့် လူထုတိုက်ပွဲဘတ်မှ ရပ်တည်ခဲ့သည့်အတွက် သာမန်နိုင်ငံခြားအသံလွှင့်ဌာနမှ ဗမာလူထု လှည်းနေလှေအောင်း။ မြင်းဇောင်းမကျန် လူသိများအ၏ကိက်တွေ့ရသည့် မီဒီယာဖြစ်လာခဲ့သည်မှာ တကဲ့ဖြစ်ရပ်ပင်ဖြစ်သည်။ ရပ်တည်ချက်ပျက်ယွင်းလျင် လူထုက လက်ခံနားထောင်နေမည်ဟုမထင်။ စစ်အုပ်စု၏ မီဒီယာအားလုံး လူကြိုက်နည်းပြီး ဖတ်သူ။ ကြည့်သူ။ နားထောင်သူ မရှိသလောက်ဖြစ်နေခြင်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရန်ဖြစ်သည်။
အားလုံးသိပြီးသော်လည်း လိုအပ်လာသဖြင့် အနည်းငယ်ထည့်သွင်းပြောရမည့် သဘာဝတရားတခုကို တင်ပြပါမည်။ ဖိနှိပ်သူ တို့၏ ဖိနှိပ်ရေးယန္တရားများတွင် မီဒီယာမျိုးစုံသည်လည်း တခုအပါအ၀င်ဖြစ်သည်။ လက်နက်ကိုင်တပ်များဖြင့် ရက်စက်ကြမ်းညကတ်စွာ ဖိနှိပ်သည်။ မီဒီယာမျိုးစုံဖြင့် မှိုင်းတိုက်သည်။ အဖိနှိပ်ခံ လူထုတရပ်လုံး စိတ်ဓာတ်ဗုန်းဗုန်းလဲအောင်လုပ်သည်။ ဖိနှိပ်သူတို့အား ဆန့်ကျင်တော်လှန်သူအားလုံးကို အားနည်းချက်ရှာ၍ လူသိရှင်ကြား ဖွင့်ထုတ်တိုက်ခိုက်သည်။ ထိုသို့ဖြင့် ဖိနှိပ်သူတို့၏ ပြောလိုရာများ လှိုင်လှိုင် ညံနေခဲ့ပြီး အဖိနှိပ်ခံတော်လှန်သူများ ပြောလိုသည်တို့ တိတ်ဆိတ်ခဲ့ရတော့သည်။ ထိုသို့ဖြင့် ဖိနှိပ်သူတို့အား ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြသူတချို့ မီဒီယာသမားများဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ကျနော်ထိုသို့ပင် ယုံကြည်သည်။
မည်သည့်လူတန်းစား။ မည်သည့်လူမှုအစုအဖွဲ့။ မည်သည့်လူမှုအုပ်စုမဆို ၎င်းတို့ စည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် မီဒီယာများ လိုသည်ပင်ဖြစ်သည်။ အနိုမ့်ဆုံး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအစုအဖွဲ့သည်ပင် မီဒီယာလိုသည်ပင်။
ဒေါင်းအိုးဝေစာစောင်က ကျောင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအကြောင်းပြောရင်း လူထု၏အဖိနှိပ်ခံရမှုကို ပြောမည်။ ချိုးလင်းပြာစာစောင်က အမျိုးသမီးများအကြောင်း ပြောမည်။ ဥပဒေရေးရာစာစောင်က ဥပဒေ အကြောင်းပြောရင်း စစ်အုပ်စု၏ ဥပဒေရေးရာအမှားများနှင့် လူထု၏ ဥပဒေရေးအရ အစော်ကားခံရမှုများကို ပြောမည်။ နိုင်တင်ဂေးစာစောင်က ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အကြောင်းများပြောရင်း လူထုကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ချို့တဲ့မှုအကြောင်းကို ပြောမည်။ ရွှေခမောက်မှတ်တမ်းလွှာက အန်အယ်လ်ဒီ၏ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာများကို ထုတ်ပြန်မည်။ ထိုသို့ဆိုင်ရာအကြောင်းများပြောရင်း။ ရေးရင်း။ သတင်းထုတ်ပြန်ရင်းဖြင့် ၀ါဒဖြန့်စည်းရုံးကြသည် ချည်း ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာကျော် တိုင်းမဂ္ဂဇင်းသည်ပင် အီရတ်နိုင်ငံကို အမေရိကန်တပ်က ၀င်ရောက်ကျူးကျော် တိုက်ခိုက်သည့် ၂၀၀၄ ခုနှစ်၏ Man of the year အဖြစ် အမေရိကန်တပ်သားတဦးဟု ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ တိုင်းမဂ္ဂဇင်းသည်လည်း ဆိုင်ရာကိစ္စအတွက် ၀ါဒဖြန့် စည်းရုံးပေးခြင်းသာလျင်ဖြစ်သည်။ ကန့်ကွက်စရာမရှိ။ ရပ်တည်ချက်ကို ဆန်းစစ်ရန်သာ ရှိသည်။
လူထုဘတ်မှရပ်ခံမည့် မီဒီယာများမရှိလျင် ဖိနှိပ်သူတို့ ပြောလိုရာပြောနေသည်ကို မှန်ရာမှန်ကြောင်း ကြောင်းကျိုးသင့် ပြန်လည်ခုခံနိုင်ခွင့် လုံးဝပျောက်ဆုံးသွားမည်။ လူထုသည် အသံတိတ်နေရသည့် အကြွင်းမဲ့ အဖိအနှိပ်ခံများ သက်သက်ဘ၀သို့ လုံးဝထိုးကျ သွားမည်။ ဖိနှိပ်သူတို့၏ စော်ကားမှုမှန်သမျှကို ထာဝရ နာခံ ရမည့် လူအန္ဓများဖြစ်သွားပေမည်။ အဖိနှိပ်ခံတို့၏ အမှောင်ခေတ်သို့ သက်ဆင်းကျရောက် သွားရပေမည်။
မီဒီယာလုပ်ငန်းမရှိပဲ ကျယ်ပြန့်သော လူထုလုပ်ငန်းမရှိနိုင်။ ကျယ်ပြန့်သည့် လူထုအား တစုတစည်းတည်းသော အတွေးအခေါ် ပေးပို့နိုင်သည့်နေရာသည် မီဒီယာများသာလျင်ဖြစ်သည်။ ပြည်သူအတွင်း ညီညွတ်ရေးကို အားကောင်းမောင်းသန် တည်ဆောက်နိုင်သည့်နေရာသည် မီဒီယာများသာလျင်ဖြစ်သည်။ အဖိနှိပ်ခံ လူမျိုးစုံပြည်သူအတွင်း အချယ်အလှယ်မခံရေး အတွေးအခေါ် စိတ်ဓာတ်ကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပေးပို့နိုင်သည့် နေရာသည် မီဒီယာများဖြစ်သည်။ ထို့အတူ တွန်းလှန်တိုက်ပွဲဝင်ရေး အတွေးအခေါ် ရဲရဲရင့်ရင့် တင်ပြနိုင်သော နေရာသည်လည်း မီဒီယာများပင် ဖြစ်သည်။ လူမျိုးစုံပြည်သူတို့ တညီတည်းသော တော်လှန်တိုက်ပွဲဝင်ရေးကို အချိန်းအချက်ပြုပေးနိုင်ခဲ့သည်မှာလည်း မီဒီယာများပင်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် မီဒီယာများ၏သဘာဝအရ တဦးတယောက်ခြင်းသဘောမဆောင်။ စာစောင်မီဒီယာပင် ဖြစ်စေ။ ရုပ်သံမီဒီယာပင် ဖြစ်စေ။ အသံလွှင့်မီဒီယာပင် ဖြစ်စေ။ နည်းပညာမီဒီယာ (Online Media) ပင် ဖြစ်စေ စုပေါင်း လုပ်ဆောင်ရသည့် သဘောဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ပင် မီဒီယာတို့၏ စည်းရုံးရေးအဆင့်အတန်းသည် စုပေါင်းသဘောဆောင်သည်။ မီဒီယာတို့သည် စုပေါင်းဝါဒဖြန့်ချီရေးမှူး။ စုပေါင်း လှုံဆော်ရေးမှူးနှင့် စုပေါင်း စည်းရုံးရေးမှူးပင်ဖြစ်သည်။ တိုက်ပွဲဝင် အားလည်းဖြစ်သည်။
“ဓားသွားထက်။ ကလောင်သွားထက်သည်” ဟူ၍ပင်ပြောလေ့ရှိကြသည်။ ကျနော်တို့ကြားမှာတော့ “မီဒီယာကျည်” ဟု ခေါ်ကြသည်။
Posted by ဖိုးညို at 2:58 AM No comments:
Posted by ဖိုးညို at 2:44 AM No comments:
နောင် ၁၀ နှစ်မှာ ကိုယ်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာ
နောင် ၁၀ နှစ်မှာလည်း
Posted by ဖိုးညို at 2:35 AM No comments:
Posted by ဖိုးညို at 2:20 AM No comments: